Ikhwalithi ephezulu ye-textile ye-ceramic hook China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Textile Ceramics > I-General Textile Ceramics > Ikhwalithi ephezulu ye-textile ye-ceramic hook
I-Model No.: JH.TC.008
I-Alumina hook ceramic hook ngokuvamile yenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% aluminium oxide. Siyakwazi ukuhlinzeka ngezindlela eziningi zokuhamba nge-ceramic hook ngombala ohlukile njengoba kuchazwa amakhasimende ngabanye noma izibonelo zesimanje.
Ukuze kuncishiswe ukuqubuzana kwe-wire guide, imbobo yangaphakathi ihlale ipholile, izinga le-polish lingaba ngu-Ra0.3 ~ 0.4, noma kungcono.
Njengamanje, sinezinkulungwane zama-ceramic eyelet ekhona ngosayizi ohlukile nombala ohlukile. Kulula ukuthola okuhambisana nemishini yakho. Ngaphandle kwalokho, sisekela i-prototyping prgoram ngomdwebo wamakhasimende noma amasampuli.
I-Custom Made Ceramic Hook